घैटेलाई गुरु भन्ने यि डिएसपीमाथि नै अनुसन्धानको माग | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
घैटेलाई गुरु भन्ने यि डिएसपीमाथि नै अनुसन्धानको माग
प्रकाशित मिति २० बैशाख २०७५, बिहीबार १४:५० लेखक नेपालीजनता
काठमाडौं । पछिल्लो समय ३३ किलो सुन प्रकरणले छानबिनले नयाँ मोड लिने क्रममा छानबिन समितिमै रहेकाहरुको छानबिन हुनुपर्ने प्रश्न उठेको छ । सनम हत्या प्रकरण छानबिन हुँदै गर्दा छानबिन समितिमै रहेका एक डीएसपीको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन तिसमितिमा रहेका डीएसपी सुदीप पाठकमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
प्रहरीको तत्कालीन अपराध महाशाखाका प्रमुखका रुपमा अहिलेका आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल भएको बेला उनकै मातहतमा महाशाखामा कार्यरत डीएसपी पाठकको प्रहरीद्वारा इन्काउन्टर गरिएका कुमार घैंटेसँग राम्रो कनेक्सन रहेको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।
अनौपचारिक कुराकानीमा घैंटेलाई गुरु भनेर सम्बोधन समेत गर्ने उनले घैंटेसँगको मिलेमतोमा त्यतिबेलै राम्रो आर्जन गरेको स्रोतको दाबी छ । त्यतिबेला महाशाखा प्रमुखले सिधै तत्परता लिएर घैंटेको इन्काउन्टर गरेपछि आफू महाशाखाको अप्रेसनमा भएकोमा आफूलाई समेत थाहा नदिई इन्काउन्टर गरेको भन्दै पाठकले बबाल मच्चाएका थिए ।
त्यसो त इन्काउन्टर हुँदै गरेको सूचना तत्कालीन प्रमुख खनालले चुहाएका भए पाठकले नै घैंटेलाई पूर्वसूचना दिएर भगाउन सक्ने खतरा देखेरै सूचना नदिएको बताइन्छ । त्यसो त इन्काउन्टरपछि घैंटे समर्थकहरुको बानेश्वरमा गोप्य भेला आयोजना गरेकोमा सो भेलामा पनि पाठक उपस्थित भएका थिए ।
पाठकसमेत प्रहरीले गरेको कारबाहीविरुद्ध भएको मोर्चाबन्दीमा सहभागी भएको सीसीटिभी फुटेज प्रधान कार्यालय पुगेपछि उनी शंकाको घेरामा रहेको बताइन्छ । कर्तुत प्रमाणित भएपछि आफूलाई सिध्याउने डरले पाठक शक्ति लगाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बडीगार्ड बस्न सफल भए ।
शक्तिमा रहेपछि कसैले छुन नसक्ने भन्दै उनले आफूविरुद्ध लाग्नेहरुलाई छानीछानी बदला लिने प्रयास त्यतिबेला गरेका थिए । तर, उनी सफल हुन सकेका थिएनन्।
बडीगार्डमा रहँदा पनि शंकास्पद भूमिकामा रहेपछि उनलाई हटाइएको थियो । तिनै व्यक्तिले अहिले पुरानै विषय उप्काएर आईजी खनाललाई असहयोग गर्ने गरी भूमिका खेलेको भन्दै आईजी सचिवलायको नोटिसमा परेको बताइएको छ ।
ताप्लेजुङ । ‘पहिले आरा (परम्परागत रूपमा काठ चिर्ने औजार) ले काठ काटेर घर खर्च जुटाइन्थ्यो । अहिले त काठ…
संसदीय सुनुवाई समितिमा तीन सदस्य मनोनित, कांग्रेलाई सभामुखको धम्की
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा तीन सदस्य मनोनित गरेको छ । सभाको आज बसेको बैठकले समिति सदस्यमा…
जन्मेको बेला साटिएका दुई बालकको रोचक ‘स्टोरी’
यो कुनै हिन्दी चलचित्रको पटकथा जस्तो लाग्छ । पहिला दुई शिशुहरू…
उच्च रक्तचापमा केरा सेवन फलदायी
काठमाडौं । केरा एउटा यस्तो फल हो, जुन केवल खानमा मात्र स्वादिष्ट नभइ सस्तो र स्वास्थ्यको लागि पनि फाइदाजनक…
क्षयरोगको करिब ५० करोड अनियमितता
काठमाडौं । राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमका लागि छुट्याएको एक अर्ब बजेटको झन्डै आधा रकम अनियमितता गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका केही…
प्रहरीबाटै खरिद ऐनको अवज्ञा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रि–फ्याबको भवन निर्माणका लागि प्रकाशित बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई अवज्ञा गरेको छ । राष्ट्रिय…
‘खानेपानी सहज वितरणको लागि भिडियो बैठक’ 304 views
मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदका विषयमा कुरा उठेपछि प्रधामन्त्रीद्धारा हस्तक्षेप 53 views
कोरोनाभाइरस: विश्वव्यापी महामारीबाट कुन देशमा कति सङ्क्रमण र मृत्यु 36 views
मृत्‍युको सपना, मलामी, शँख र आर्यघाट ! 29 views
ससुरा बा ! (कथा) 25 views
राजकुमार ह्यारी र मेघनको सुरक्षा खर्च अमेरिकाले गर्दैन- ट्रम्प 13 views
अमेरिकी न्यूरोसर्जन डाक्टर जेम्स टी गूडरिचको कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को संक्रमणबाट मृत्यु 10 views